Qoysas ku barakacay Beledweyne oo laga caawiyay inay dhistaan guryo cariish ah - Radio Ergo
(ERGO) – Cadar Axmed Macoow oo ah 72 jir muddo sanado ah ku nool xerada barakaca Shareeco ee magaalada Beledweyne kuma aysan fikirin inay ku noolaan doonto guri cariish ah oo ay iyadu leedahay.
Waxay kowdii bishan Oktoober ka mid ahayd 25 haween ah oo lagu wareejiyay guryo cariish ah oo laga dhisay xerada Shareeco. Guryaha waxaa lagu dhisay lacag ay iska ururiyeen dadka ku nool xerada.
“Weligey isma laheyn gurigan ayaad heli. Waan ku faraxsanahay. Inaan iskaashato isku qorno ayay noqotay. Mid walba gaar wuu u dhisan waayay laakiin inaan mid walba u dhisno ayay noqotay,” ayay tiri.
Boqolka qoys ee ku nool xerada Shareeco ayaa ku dhaqaaqay qorshe ay isaga uruurinayaan maalin walba oo jimco ah $3, taasi oo ay soo billaabeen bishii Abriil ee sanadkaan. Arrintaan ayay sheegeen in ay ku dhalatay markii ay dabeylo ka dumiyeen aqalladooda oo cooshado ahaa bishii koowaad ee sanadkan. Bishii Agoosto ee sanadkaan ayay bilaabeen dhisida guryaha cariishka ah.
Dhulka ay qoysaskan barakaca ah ka dhisteen guryaha ayaa ah dhul lagu sadaqeystay.
“Alxamdullaahi mid alaabta aan gashanno aan ugu imaaneyno ayaan sameysannay. Asal waxa uu ahaa dabeyl, rafaad, dan-darro. Meel aan dab ku shito ma lahayn ciid ayaa indhaha iga galeysay. Hadda waa meel daboolan,” ayay tiri Cadar, oo korisa afar gabdhood oo rajo ah oo ay ayeeyo u tahay.
Cadar ayaa ku soo biirtay xeradaan kaddib markii 50 neef oo ari ah oo ay ku dhaqaneysay deegaanka Buq-aqable ay ku wayday abaartii 2015-2016-kii.
Waxay nolosha qoyska ku maareysaa khudaar aan badneyn oo ay ku iibiso suuqa Buunda-weyn ee magaalada Beledweyne. Khudaarta ayay sheegtay in ay deyn ku soo qaadato subaxa hore, galabkii marka laga iibsadana ay lacagteeda dib u celiso.
Dhaqaalaha ay ka hesho khudaarta ayay tilmaantay in qeyb ay reerka ku biisho, qeybta kalena ay ku bixiso qaaraanka guryaha lagu dhisayo.
Cadar ayaa bil walba ka bixiso $25 gabdhaha ay koriso oo labo ka tirsan ay dhigtaan iskuul deegaanka ku yaalla halka labada kale ay dhigtaan dugsi.
Cadar ayaa xustay inay ku faraxsan tahay in guriga cariishka ah ay hesho roobka deyrta ah ka hor.
Qamar Daahir Guuleed oo ah 58 jir ku shaqeysata iibinta dharka dumarka ee ‘ha-i-wareerinta’ loo yaqaan ayaa sidoo kale ka mid ah dadka guryaha helay. Waxay maalintii shaqeysaa $5 ilaa iyo $8. Waxay ka timid magaalada Qallaafe ee Dowlad-deegaanka Soomaalida si ay carruurta ula koriso wiilkeeda oo ku nool xerada Shareeco, kaas oo ku shaqeeya muruq-maal.
Qamar ayaa labo ka tirsan carruurta wiilkeeda ka bixisa lacagta waxbarashada, taasi oo ay awoodi weysay saddexdii bil ee u dambeysay, maaddaama ay bixineysay lacagta dhismaha guriga.
Cabdullahi Xasan Cabdi oo ah ninka ugu deeqay dhulka dadkaan barakaca ah ayaa uga soo deymiya dukaamada magaalada qalabka guryahaan lagu dhisayo, maaddaama dadka barakaca ah aan la siineyn deyn. Lacagta deynta ayuu bixiyaa dhaqaalaha ay dadkan isku keenaan Jimco kasta.
“Qof kasto inta ku qoran iyo inta lagu leeyahay aniga ayaa haya. Bil walba waxaan helno ayaan dukaanka geynaa waana kasoo qaadannaa wixii aan u baahannahay. Bishii la soo dhaafay $180 oo xerada laga uruuriyay ayaan u geynay,” ayuu yiri.
Toban guri oo kale ayaa hadda u qabyo ah qoysaskan sida uu sheegay Cabdullaahi. Ka hor inta uusan roobka imaan ayaa la qorsheynayaa in la soo gabagabeeyo.